Satria nifarana ny taona 2019, misaotra anao ry Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Satria nifarana ny taona 2019, misaotra anao ry Global Voices!
Voadika ny 08 Janoary 2020 14:39 GMT
Ry GV-er namana rehetra!
Koa satria efa manakaiky ny faran'ny taona 2019 (lahatsoratra nivoaka alohan'ny faran'ny taona) dia hindrana fotoana fohy aho hisaorana ny tsirairay avy aminareo. Nanoratra sy namoaka ny sasany tamin'ireo asa tsara indrindra nataontsika teo amin'ny tantarantsika isika. Tena namiratra tokoa tamin'ity taona ity ny asasoratsika, ny fifantohana tamin'ny antsipirihany ary ny fikarakarana. Mbola manohy ny fanohanany antsika rehetra amin'ny ezaka ataontsika hitantara ny tantarantsika ny ekipantsika misahana ny famoahandahatsoratra mavitrika sy matanjaka. Mazoto mifoha isan'andro aho hijery izay azontsika vokarina sy mba hihaino vaovao avy aminareo rehetra.
Ary manao izany rehetra izany isika noho ny fanoloran-tenanareo, ny fifantohanareo ary ny fahalalahan-tananareo. Tsy taona farany mora indrindra ho antsika ny taona 2019 satria ny tsy fahampian'ny fanohanana ara-bola dia nanasarotra antsika amin'ny fanohanana manontolo ny toniandahatsoratra tiantsika ananana, hitombo, hanatsara ny teknolojiantsika, ary ny fanohanana betsaka araka izay tiantsika ny vondrom-piarahamonina. Kanefa na izany aza, nihatsara ny voivoy, nankatoavin'ny besinimaro hatrany ireo lohahevitra nosoratantsika ary mbola manana hery, fifandraisana ary drafitra betsaka isika.
Izany no niseho na dia teo aza ny taona nisian'ny politika sarotra sy mihakitanontanona nitranga tao amin'ny maro tamin'ny firenentsika any (tokantranontsika), izay nahitana ny sehatra an-tserasera niha-narefo ara-piarovana hatrany, ary samy nitombo ny fanitsakitsahana ny zo amin'ny tena fiainana sy an-tserasera. Natanjaka ny asantsika momba ny zo nomerika indrindra indrindra tamin'ity taona ity tany amin'ny Afrika Atsimon'i Sahara, Azia Atsinanana ary Eoropa Afovoany sy Atsinanana ary Eorazia, na dia nitolona ho amin'ny fiarovana ireo mpandray anjara izay lasibatry ny fanafihana avy amin'ny governemanta, antoko politika, tambajotra mpanakorontana sy ny maro hafa izay mikendry ny hametra ny zon'ny fanehoan-kevitra sy ny fandraisana anjara sivily aza isika.
Raha mankalaza ny tsingerintaonantsika faha-15 (15! Oah!) isika dia mbola haveriko indray ny fisaorana anareo tamin'ny zavatra rehetra nataonareo sy noho ny fanohizana ny fitanana hatrany ny maodely (fotokevitra) sy ny iraky ny Global Voices!